Galaxy Z tụgharịa: ihe niile ị chọrọ ịma banyere Samsung ọhụrụ mpịachi ama | Akụkọ akụrụngwa
Samsung nke abụọ nzọ na mpịachi ama ahịa a na-akpọ Galaxy Z tụgharịa. Samsung Galaxy Z Flip na-abịa a kpamkpam dị iche iche imewe karịa Fold Galaxy, format na folds dị ka akwụkwọ. The Galaxy Z Flip bụ ụdị mkpọtụ, yiri Motorola RAZR, mana nwere nkọwa dị elu karịa ụdị Motorola.
Ihe nlere a, n'ihi usoro mmeghe ọ na-enye anyị, na-echetara ndị ọdịnala igbe ntụ ntụ nke ụmụ nwanyị ji eme ihe, ndị ọha na eze nke a na-eche ọnụ a, ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị. Samsung achọghị ịta ahụhụ otu nsogbu ahụ na ihuenyo nke Galaxy Fold ma chebe ihuenyo ahụ na obere iko, ọ nweghị ihe nkiri plastik.
Ihuenyo nke Z Flip kpuchie ya na iko dị oke mkpa iji chebe ihuenyo megide ọkọ ma ọ bụ bumps, ya mere nsogbu ndị ọgbọ mbụ nke Agbo ogige ewepụtara agaghị ewepụtakwa na Z Flip. Ọ na - enye gị ohere belata ọnụ ọgụgụ wrinkles nke ihe plastik na - akpata. Dịka anyị nwere ike na onyonyo nkwado, size nke apịaji Z tụgharịa dabara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụla n'akpa uwe na ike ga-emeghe na otu aka.
Modeldị ọhụrụ a nwere uzo mmeghe di iche, Ọ bụghị naanị imeghe dị ka ekwentị-ụdị ekwentị, mana anyị nwere ike imeghe ya dị ka a ga-asị na ọ bụ laptọọpụ, ọrụ dị mma iji nwee ike iji onwe gị were nkasi obi, dị ka anyị hụworo na ngosi ahụ. Nnukwu ihuenyo nke ọ na-enye anyị ozugbo emepere, bụ 6,7 sentimita asatọ na usoro 22: 9, nke na-eme ka ọ bụrụ ezigbo ama maka netwọkụ mmekọrịta yana iri ọdịnaya ọdịnaya.
Galaxy S20 bụ akara ọhụrụ nke Samsung maka njedebe dị elu
Nkwado nke Galaxy Z tụgharịa, ihe kachasị mkpa, ọbụlagodi n'elu ihuenyo ahụ, sitere na ifuru lotus, ma na-ekwupụta ya site na mmegharị mmegharị na-eju afọ, na-enye ohere ịhazigharị mmechi mmechi. Na mgbakwunye, n'ihi teknụzụ ya na-azachapụ, ọ na-achụpụ ụdị unyi ọ bụla nwere ike ịba n'ime ya na nke nwere ike imetụta ọrụ nke usoro ahụ ogologo oge.
Ezubere ihuenyo nke mpụga 1,03 nke anụ ọhịa iji gosipụta ọkwa na anyị ga-agụ na njedebe, mana na mgbakwunye, ọ na-enyekwa anyị ohere ịza oku site na ịpị mkpịsị aka anyị na ya. Ihuenyo a Echere m na ọ bụ ebe kachasị ike na ọdụm a, ebe ọ bụ na ọ na-amanye anyị, ee ma ọ bụ ee, iji mepee ọnụ iji lelee ozi ọ bụla ma ọ bụ ozi ọ bụla anyị natara, mana ọ bụrụ na anyị echebara na ọ fọrọ nke nta ka anyị hụghị ebe ọ bụ na ezoro ya n'okpuru agba nke ọnụ, nwere ike zie ezi na mkpebi Samsung.
1 Igwe igwefoto Galaxy Z
2 Thom Browne Special mbipụta
3 Galaxy Z tụgharịa nkọwa
4 Galaxy Z tụgharịa price na nnweta
Igwe igwefoto Galaxy Z
Samsung nkwa a ọhụrụ mpịachi ama echiche anaghị eleghara igwefoto anya, akụkụ kachasị mkpa maka ọtụtụ ndị ọrụ mgbe ha na-emegharị ọnụ ha, agbanyeghị, Samsung akwụbeghị otu mmasị ahụ dị na ọhụụ ọhụrụ Galaxy S20doro anya n'ihi ego ga-arị elu.
Galaxy Zlip tụgharịrị kamera azụ abụọ, a 12 mpx isi na 12 mpx telephoto, na Baịbụl hiwere isi n'ebe apertures nke f / 1.8 na f / 2.2 karị. Igwefoto n'ihu na-enye anyị mkpebi nke 10 mpx na oghere nke f / 2.4.
Thom Browne Special mbipụta
Samsung esorola onye uwe ojii nwoke America bụ Thom Browne rụkọrịta ọrụ iji malite mbipụta pụrụ iche nke Galaxy Z Flip, mbipụta pụrụ iche nke ga-agụnye Galaxy Buds na Galaxy nọ n'ọrụ. Banyere ọnụahịa nke mbipụta a pụrụ iche, anyị ga-echere ụbọchị ole na ole iji mata ya ma ọ bụrụ na ọ mesịa rute mba niile ebe Samsung ga-adị na Samsung.
Galaxy Z tụgharịa nkọwa
Ime ụlọ 6.7-inch AMOLED teknụzụ nwere mkpebi FullDH + na usoro 22: 9
Ihuenyo mpụga 1.06-anụ ọhịa AMOLED na mkpebi 300 × 116 pixel
Nhazi Snapdragon 855 + (ọgbọ nke abụọ)
Nchekwa ime 256 GB ụdị UFS 3.0
Rear igwefoto 12 mpx f / 1.8 igwefoto isi na 12 mpx f / 2.2 igwefoto nke abụọ
Igwe n'ihu 10 mpx f / 2.4
Usoro njikwa A gam akporo 10 nwere otu UI 2.0
Batrị 3.300 mAh - na-akwado ngwa ngwa na ikuku na-akwụ ụgwọ.
Njikọ Bluetooth 5.0 - WiFi 6 - USB-C
ndị ọzọ Mkpisiaka agụ na - AKG ọkà okwu
Galaxy Z tụgharịa price na nnweta
Dị ka ọtụtụ asịrị kwuru, Samsung chọrọ ka ọ ghara igbu oge na mwepụta nke ọhụrụ a ọnụ na igba egbe bụ February 14, na ụbọchị atọ. Banyere ọnụahịa ahụ, dịka asịrị ahụ gosikwara, pricegwọ dị gburugburu euro 1.500. Enwere naanị ụdị nke nwere nchekwa 256 GB, ụdị 4G. N'oge a agaghị ewepụta ụdị 5G nke ụdị a.
Abụọ na agba ga-abụ dị na Spain: mirror purble na enyo oji, Thedị ọla edo ahụ anyị hụrụ n'oge ngosi ahụ dị ka n'oge ahụ ezubereghị ya maka mmalite ya na Spain, dị ka ụdị nke onye mmebe Tom Browne.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Galaxy Z Flip: ihe ọ bụla ị chọrọ ịma banyere Samsung ọhụrụ foldable smartphone